Dreams – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
? ဆယျတနျး (သို့မဟုတျ) မအိပျဘဲ မကျကွတဲ့ အနာဂါတျ အိပျမကျလှလှလေးတှေ ?
ကြောငျးဝငျးထဲကို အမောတကော ပွေးဝငျတော့ ခွလှေမျးတှကေ တဈခုခုဆှဲထားသလိုပဲ။
စာမေးပှဲခနျးထဲရောကျတဲ့ထိ တဒိုငျးဒိုငျးခုနျနတေဲ့ ရငျက မငွိမျသေး။
သူမြားတှကေ ဝမျးသာအားရ ဖွနေကွေပွီ။
စားပှဲပျေါက မေးခှနျးစာရှကျကို ဖတျကွညျ့လိုကျမှ ခေါငျးကို မိုးကွိုးဆယျခကျြလောကျ ပဈခခြံလိုကျရသလိုပဲ။
အစ အဆုံး တဈလုံးမှ မသိ။
ဝမျးနညျးအားငယျစိတျတှေ လှိုကျဆို့တကျလာပွီး မကျြရညျတှကေလြာလုလုမှာပဲ ဖတျြခနဲ လနျ့နိုးလာတယျ။
ဒီလို ဆယျတနျးအိပျမကျဆိုးတှကေ ဘယျအရှယျရောကျရောကျမကျတုနျး။
နတျထကျပိုကွီးတာကတော့ မိဘတှရေဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြ။
ဆယျကြျောသကျ ကလေးတဈယောကျအတှကျတော့ အဲ့ဒီ့မြှျောလငျ့ခကျြတှကေပေးတဲ့ စိတျရောကိုယျပါ ဖိစီးမှုတှကေ သူ့ခံနိုငျရညျထကျ ပိုကွီးနတေတျတယျ။
ကိုးတနျးဖွပွေီးကတညျးက တကျလိုကျရတဲ့ ကြူရှငျတှေ၊ ကကျြလိုကျရတဲ့စာတှေ။
ကလေးတှတေငျမက မိဘတှပေါ စိတျမောလူမောဖွဈရတဲ့ စာမေးပှဲ။
မာရသှနျပွေးသလို သကျလုံကိုထိနျးထားပွီး မှနျမှနျလေးပွေးလာရသညျ့ပှဲ။
ပနျးဝငျခါနီးမှ ပိုအားသှနျခှနျစိုကျပွေးရပမေဲ့လညျး စာမေးပှဲနီးမှ မအိပျမနေ အကွိုးစားလှနျလို့မရ။
ဆယျတနျးစာမေးပှဲအတှကျ နံပါတျတဈအရေးအကွီးဆုံးက စာရဖို့ဆိုရငျ နံပါတျနှဈက ကနျြးမာဖို့ပါပဲ။
ကနျြးမာရှငျလနျးစိတျဖိစီးမှုကငျးစှာနဲ့ ဘယျစာမေးပှဲမဆိုဖွတျကြျောနိုငျဖို့ အတှကျ..
ဆကျတိုကျအိပျခြိနျတဈနကေို့ အနညျးဆုံး ၆ နာရီ ၇နာရီ ရှိရပါမယျ။
ဦးဏှောကျရဲ့ မှတျဉာဏျအတှကျရော ကိုယျခံအားကောငျးဖို့ အတှကျပါ အိပျရပါမယျ။
ကိုယျခံအားကလြာရငျ အဖြားအနာ၊ နှာစေးခြောငျးဆိုး၊ တုပျကှေး စတာတှေ ဝငျလာတတျပါတယျ။
မအိပျဘဲကကျြပွီး အတငျးဆှဲချေါလာတဲ့စာတှကေ စာမေးပှဲခနျးထဲရောကျမှ ခေါငျးထဲက အလုအယကျဆငျးပွေးသှားတတျတယျ။
– စိတျဖိစီးရငျ အစာအိမျရောဂါထတတျတာမို့ အစာအိမျရောဂါ အခံရှိသူတှေ ပိုသတိထားစားသောကျရပါတယျ။
အခဉျြ၊အစပျ၊ လကျဖကျ၊ လကျဖကျရညျ၊ ကျောဖီ၊ အားဖွညျ့အခြိုရညျတှကေ လနျးဆနျးစတောမှနျပမေဲ့ အစာအိမျရောငျသှားတတျပါတယျ။
– ဝမျးပကျြဝမျးလြှောမဖွဈဖို့ လတျဆတျသနျ့ရှငျးတာလေးတှစေားဖို့ လိုပါတယျ။
စားလေ့ မရှိတာတှေ ရှောငျသငျ့ပါတယျ။
ငှကျပြောသီး၊ ထောပတျသီး၊ နှားနို့၊ ဒိနျခဉျြ၊ လိမ်မျောသီး၊ ကညှတျ၊ Almonds၊ သီဟိုဠျစေ့၊ သဈကွားသီး၊ Green Tea၊ စပဈြသီး၊ ခြောကလကျ စတဲ့အစားအသောကျတှကေ ဦးဏှောကျ မှတျဉာဏျအတှကျ အရေးပါသလို စိတျဖိစီးမှုကိုလညျး လြော့စပေါတယျ။
အားရှိပမေဲ့ အယူသညျးရငျတော့ ဘဲဥ ကွကျဥ ငုံးဥ ရှောငျပေါ့။
စိတျဖိစီးမှုတှလြေော့စဖေို့Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12 ဆိုတဲ့ Vitamin B complex လိုပါတယျ။
ကိုယျတိုငျလညျး စာသခြောကကျြဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော။
ကိုယျခံအားကောငျးဖို့ကတော့ Vitamin C လိုပါတယျ။
အစားအသောကျတှမှော ဒီ Vitamins တှပေါနပေမေဲ့လညျး စနဈတကြ တှကျခကျြ မစားသောကျနိုငျတဲ့အတှကျ အားဆေးတဈခုခုသောကျတာတော့ မမှားပါဘူး။
မသောကျခငျ ဗိုကျထဲအစာရှိဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
ကလေးတှေ အတှကျလိုအပျသလို ကြောငျးအပွငျကနေ တူတူဖွပွေီး အပူတှဝေနေတေဲ့ မိဘတှအေတှကျလညျး လိုပါတယျ။
ဘာဖွဈဖွဈ အကောငျးဆုံးအားဆေးကတော့ အားလုံးမှာရှိပွီးသားနမှောပါ။
‘စာမေးပှဲ ပွီးရငျ’ဆိုပွီး ကွိုတှေးထားတဲ့ ပြျောစရာတှရေယျ..
သိပျမဝေးတော့တဲ့ နရောတဈခုမှာ ကိုယျ့ကိုစောငျ့ကွိုနမေဲ့ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ အနာဂတျအိပျမကျ လှလှလေးတှရေယျပေါ့။
? ဆယ်တန်း (သို့မဟုတ်) မအိပ်ဘဲ မက်ကြတဲ့ အနာဂါတ် အိပ်မက်လှလှလေးတွေ ?
ကျောင်းဝင်းထဲကို အမောတကော ပြေးဝင်တော့ ခြေလှမ်းတွေက တစ်ခုခုဆွဲထားသလိုပဲ။
စာမေးပွဲခန်းထဲရောက်တဲ့ထိ တဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေတဲ့ ရင်က မငြိမ်သေး။
သူများတွေက ဝမ်းသာအားရ ဖြေနေကြပြီ။
စားပွဲပေါ်က မေးခွန်းစာရွက်ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်မှ ခေါင်းကို မိုးကြိုးဆယ်ချက်လောက် ပစ်ချခံလိုက်ရသလိုပဲ။
အစ အဆုံး တစ်လုံးမှ မသိ။
ဝမ်းနည်းအားငယ်စိတ်တွေ လှိုက်ဆို့တက်လာပြီး မျက်ရည်တွေကျလာလုလုမှာပဲ ဖျတ်ခနဲ လန့်နိုးလာတယ်။
ဒီလို ဆယ်တန်းအိပ်မက်ဆိုးတွေက ဘယ်အရွယ်ရောက်ရောက်မက်တုန်း။
နတ်ထက်ပိုကြီးတာကတော့ မိဘတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်။
ဆယ်ကျော်သက် ကလေးတစ်ယောက်အတွက်တော့ အဲ့ဒီ့မျှော်လင့်ချက်တွေကပေးတဲ့ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဖိစီးမှုတွေက သူ့ခံနိုင်ရည်ထက် ပိုကြီးနေတတ်တယ်။
ကိုးတန်းဖြေပြီးကတည်းက တက်လိုက်ရတဲ့ ကျူရှင်တွေ၊ ကျက်လိုက်ရတဲ့စာတွေ။
ကလေးတွေတင်မက မိဘတွေပါ စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတဲ့ စာမေးပွဲ။
မာရသွန်ပြေးသလို သက်လုံကိုထိန်းထားပြီး မှန်မှန်လေးပြေးလာရသည့်ပွဲ။
ပန်းဝင်ခါနီးမှ ပိုအားသွန်ခွန်စိုက်ပြေးရပေမဲ့လည်း စာမေးပွဲနီးမှ မအိပ်မနေ အကြိုးစားလွန်လို့မရ။
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲအတွက် နံပါတ်တစ်အရေးအကြီးဆုံးက စာရဖို့ဆိုရင် နံပါတ်နှစ်က ကျန်းမာဖို့ပါပဲ။
ကျန်းမာရွှင်လန်းစိတ်ဖိစီးမှုကင်းစွာနဲ့ ဘယ်စာမေးပွဲမဆိုဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ အတွက်..
ဆက်တိုက်အိပ်ချိန်တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၆ နာရီ ၇နာရီ ရှိရပါမယ်။
ဦးဏှောက်ရဲ့ မှတ်ဥာဏ်အတွက်ရော ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ အတွက်ပါ အိပ်ရပါမယ်။
ကိုယ်ခံအားကျလာရင် အဖျားအနာ၊ နှာစေးချောင်းဆိုး၊ တုပ်ကွေး စတာတွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။
မအိပ်ဘဲကျက်ပြီး အတင်းဆွဲခေါ်လာတဲ့စာတွေက စာမေးပွဲခန်းထဲရောက်မှ ခေါင်းထဲက အလုအယက်ဆင်းပြေးသွားတတ်တယ်။
– စိတ်ဖိစီးရင် အစာအိမ်ရောဂါထတတ်တာမို့ အစာအိမ်ရောဂါ အခံရှိသူတွေ ပိုသတိထားစားသောက်ရပါတယ်။
အချဉ်၊အစပ်၊ လက်ဖက်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ အားဖြည့်အချိုရည်တွေက လန်းဆန်းစေတာမှန်ပေမဲ့ အစာအိမ်ရောင်သွားတတ်ပါတယ်။
– ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောမဖြစ်ဖို့ လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတာလေးတွေစားဖို့ လိုပါတယ်။
စားလေ့ မရှိတာတွေ ရှောင်သင့်ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီး၊ ထောပတ်သီး၊ နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ လိမ္မော်သီး၊ ကညွတ်၊ Almonds၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ သစ်ကြားသီး၊ Green Tea၊ စပျစ်သီး၊ ချောကလက် စတဲ့အစားအသောက်တွေက ဦးဏှောက် မှတ်ဥာဏ်အတွက် အရေးပါသလို စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း လျော့စေပါတယ်။
အားရှိပေမဲ့ အယူသည်းရင်တော့ ဘဲဥ ကြက်ဥ ငုံးဥ ရှောင်ပေါ့။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေလျော့စေဖို့ Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12 ဆိုတဲ့ Vitamin B complex လိုပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်လည်း စာသေချာကျက်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော။
ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ ကတော့ Vitamin C လိုပါတယ်။
အစားအသောက်တွေမှာ ဒီ Vitamins တွေပါနေပေမဲ့လည်း စနစ်တကျ တွက်ချက် မစားသောက်နိုင်တဲ့အတွက် အားဆေးတစ်ခုခုသောက်တာတော့ မမှားပါဘူး။
မသောက်ခင် ဗိုက်ထဲအစာရှိဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
ကလေးတွေ အတွက်လိုအပ်သလို ကျောင်းအပြင်ကနေ တူတူဖြေပြီး အပူတွေဝေနေတဲ့ မိဘတွေအတွက်လည်း လိုပါတယ်။
ဘာဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံးအားဆေးကတော့ အားလုံးမှာရှိပြီးသားနေမှာပါ။
‘စာမေးပွဲ ပြီးရင်’ဆိုပြီး ကြိုတွေးထားတဲ့ ပျော်စရာတွေရယ်..
သိပ်မဝေးတော့တဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ ကိုယ့်ကိုစောင့်ကြိုနေမဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အနာဂတ်အိပ်မက် လှလှလေးတွေရယ်ပေါ့။